トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [Horukon Set Operations]
Kana yakawanda vanhu vakaenda kutamba ari nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti kutarisa umboo ari date rambi. Kana musingadi kutarira data, umo kuchikuva ndizvo kuyerera mhando, haazvizivi auya naye. Data rambi ndiyo Data ruzivo pamusoro vatengi. Saizvozvo sezvo ichi, tine muchina kuti ndiko muchitoro kutsiva date rambi.
nepachinko yokumusoro shure uye Horukon, akaita vakakwanisa mune muchina iyo anonzi zvinenge kombiyuta chitoro yose mashoko. Achitaura pazvinoonekwa Horukon, kutaura mumwe nomumwe uchitamba mutambo tafura, uwandu muchibereko uye jackpot kanoverengeka uye akaisa mari, uye, kuti chii auya kubva pamwero sei zvikuru, vakanga vakanwa kusvikira mashoko anonzi muchina paradzanisa iwe.
rimwewo, uye mumwe uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. Data uye zvitoro rwose uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. Data nerimwe chitsuwa, unofanira zvakarurama kutarisira-siyana mashoko.
Horukon, saka unofanira kuwedzera yakarurama data, pamusaka ivepo, divi nepachinko yokumusoro, mangwanani kuonekwa uye kukundikana chawo kuwanikwa Goto chiito, uyewo, uye zvinogonawo kutarisa matambudziko akadai wiring ari kunze ndine. In
mumigwagwa, kana ndaisa nzira kubatwa kuti hunonzi Horukon kubatwa. Zvechokwadi, zvinoita sokuti kunewo Horukon kuti akadaro chiito kunogona kuva. Zvakanaka chii zvinonzi kune horo conserver kubatwa, iyo vati iri kunzi takunda kunzwisisa tsika Horukon ichi. Maererano nokuchinja
payout uye mukana kune mamiriro ezvinhu chitoro, zvinonzi nokushanda anogona kuva. Sezvo Horukon ndiye muchina, imi chinobuda chinhu rinonzi tsika yacho muchina.
Somuenzaniso, chii inowanzonzi akataura, kuti aratidze Toka jackpot riri volley ose chete, saka kuti bhora kunze ari panze, mota shoma pamusoro mumwe chitsuwa, isa bhora kana, tafura kukona zvakanaka chete Toka rova, kuguma nhamba, zvinonzi akati kukwanisa kana kusunungurwa ndeimwewo payout kuchiitirwa boka.
kuenda andobata kuyeva ndiye Horukon kubatwa nzira.
_x000D Munyaya _, kana kuti kuona apo zvakananga iri kana kuita Horukon vainyengera?
Horukon haina aida kuchinja mumwe munhu dzakarukwa zvakanaka payout, zvinonzi zvinogona kushandiswa mumwe nomumwe nebundu kumarudzi akawanda.
Chokwadi, sezvo ari, dzakabatana akadai shanu kubva pamugumo chitoro chiri muboka, uye izvi zvingaita kuti pave vakawanda kudaro nyore, nokuti izvozvo pachena kufungira kufunga, kana akanga akapembera mumwe, Kakudai kana kana, akakamurwa mumwe muchina nhamba yakanga, chitsuwa ose, uye zvichingodaro, pane muenzaniso siyana chitoro. By ona kuburikidza payo anowedzera mukana kuti awane simba kumira.
Horukon riri vakanzwa hurukuro kuti anogona kuva akadai kusunungura bhora kunze chete imwe nguva. Chii kazhinji kuedza kusunungura payout shopu kwayo chero nguva mapazi, unogona kupinda maonero kupinda refu. Somuenzaniso, mudzimu uri nguva mapazi ave yepamusorosoro, zvakadai kuti unogona kuchengeta kuti uchida kukumbira vamwe vatengi kusunungura payout, mangwanani, uye akasunungura munzvimbo duku nguva mapazi ari vateereri, chemumwe ari regulars zviri zvizere zvinoita nyaya sezvinobvira.
kana kuramba achienda iroro revhiki, zuva
nguva mapazi, iwe zvingangokukunda tsika inobuda pakuti vari ainyatsotevedzera. PayDay asati kana tichishandisa inotapira, saka musi kuti kana inotapira nani pamusoro mevhiki. Ndapota edza kuchengeta zvinhu muchitoro kuti ndiye kuburikidza.
Horukon kubatwa nzira ndeyokuti zvayakanakira nezvayakaipira achizvipesanisa, Vamwe vanhu vanofunga kuti uri kushandisa dzinoverengeka zvitoro, pane vanhu asingazowani kushandisa chinhu chakadai. Ndaiti kana, akanaka panyaya Horukon kubatwa nzira. Kunze kana zvakaipa Horukon akanaka, pachena chimwe tafura, chitsuwa Kunyanya chete, nekuti ndinoona muchimiro anenge raputika chete dzimwe nguva zuva. Kunyange zvazvo
kubheja, nepachinko chitoro munoziva Usarega achivaratidza kuvhima uye mubereko.
Uyewo, kana kuita rimwe mhando chiitiko (somuenzaniso :! Eva zvikuru Mediation), chete zvechokwadi chipikiri kuchinja, kana tichakwanisa liven vakwire Eva chacho? Pasinei chipikiri Gabagaba, ndiani vasingadi kuvhura kana yakajeka zvikuru kuonekwa, Saka kutaura kana, mira hombe raparadza mukana kwakadaro 1/400 ndiko, uyewo achakwanisa superimpose munhu nyore jackpot chii zviumbu UGA?
vava kuda kuvhara chiitiko chakadaro, inofanira yakacherechedza kuti kutarisa mashoko Robo. Zvakajeka Husband guru raparadza mukana ari kumusoro. izvozvo chinhu nezuva kuwanika. Ndiri muna Naizvozvo pakureva pamwero Horukon kubatwa nzira, hazvina ikoko yakanaka pezvaaitsigira.